Kedu ka mmemme iguzosi ike n'ihe na -aga nke ọma si eme ka nghọta na akụ na ụba akparamaagwa | Martech Zone
Kedu ka mmemme iguzosi ike n'ihe na -aga nke ọma si eme ka nghọta na akụnụba akparamagwa pụta
Fraịde, Ọktọba 1, 2021 Fraịde, Ọktọba 1, 2021 Suzi Tripp
Rịba ama: Ọ bụ onye dere akụkọ a Douglas Karr site na ajụjụ Q&A na Suzi site na email.
Mmemme iguzosi ike n'ihe na -enye ụdị aha ohere ijigide ndị ahịa ha dị ugbu a wee mee ka ha bụrụ ndị na -eme mkpọtụ. Site na nkọwa, ndị otu iguzosi ike n'ihe maara akara gị, na -emefu ego na gị, na -enyekwa gị data bara uru na usoro a.
Maka òtù dị iche iche, mmemme iguzosi ike n'ihe bụ ụzọ dị mma iji kpughee nghọta bara uru gbasara ndị ahịa, mụta maka ihe na-eme ha akara, ma mechaa nwekwuo mmekọrịta siri ike nke nwere ọtụtụ uru. Site na atụmatụ bara uru siri ike, mmemme iguzosi ike n'ihe nwekwara ike kwado mbọ nnweta ndị ahịa.
Maka ndị ahịa, nkwalite na uru efu dị mkpa, mana ọ karịrị nke ahụ. Ndị na -eri ihe na -enwe mmasị na -enwe mmetụta bara uru ma na -achọ ịmalite mmekọrịta - ọ bụ ihe anyị ga -eme. Mmemme iguzosi ike n'ihe na -enye ndị ahịa mmetụta nke ịbụ ndị nwe, mmetụta nke inwe ekele, yana nyekwa dopamine ahụ mgbe ha hụrụ uru ndị ahụ na -abata ma ọ bụ ọnọdụ iguzosi ike n'ihe anyị na -ebili. Na nkenke, mmemme iguzosi ike n'ihe bara uru maka nzukọ na ndị na -azụ ahịa.
Mmemme Ikwesị ntụkwasị obi abụghị naanị maka ire ere
At Brooks Bell, anyị na -edozi nsogbu azụmahịa dị mgbagwoju anya site na nnwale na nghọta. Ọtụtụ òtù na -akọwa mmemme iguzosi ike n'ihe na -aga nke ọma dị ka nke na -akụ ihe mgbaru ọsọ ha ma a bịa n'ị nweta ọnụọgụ ụfọdụ ndị otu iguzosi ike n'ihe ọhụrụ ma ọ bụ ibugharị ọnụ ọgụgụ ụfọdụ ndị otu site n'otu ọkwa gaa n'ọzọ.
Agbanyeghị, akara nke mmemme na -aga nke ọma n'ezie bụ na ndị otu na -ahụ mmemme iguzosi ike n'ihe ha dịka ọwa nghọta ndị ahịa. Kama ilekwasị anya na ọnụọgụ ndị a, òtù ndị a na -elekwasị anya n'ịchọpụta ya mere n'azụ njikọ aka ndị ahịa na ika.
Ndị otu a na -eji ozi ahụ iji ghọta ndị ahịa nke ọma ma nyefee uru dị ịtụnanya dabere n'ihe ndị dị mkpa nye ndị ahịa ha. Mmụta ndị ahụ anaghị anọ n'ime mmemme iguzosi ike n'ihe - a na -ekerịta ha na nzukọ niile ma nwee ike imetụta ọtụtụ ihe mmetụ aka nke onye ahịa ọ bụla nwere na akara ha.
Mmemme Mmemme Iguzosi Ike n'Ihe Ndị A Ga -ezere
A na -elekarị mmemme iguzosi ike n'ihe anya dị ka ọnụ ahịa ọnụ ahịa n'ime otu nzukọ, na -ebute na ha na -anọkarị n'akụkụ - na -enweghị mmefu ego, akụrụngwa ma ọ bụ ngwaọrụ. Mmemme iguzosi ike n'ihe nwere nnukwu ikike iwepụta nghọta bara uru mana, n'ihi ọnọdụ ha na nzukọ a, enwere ike ileghara ya anya ma ọ bụ leda ya anya. Anyị na-akwado ụdị dị iche iche iji hụ na iguzosi ike n'ihe na-arụ ọrụ ozugbo n'akụkụ niile nke ahụmịhe ndị ahịa dị ka e-azụmahịa, nlekọta ndị ahịa, ahịa, wdg. , na ntụgharị.
Kedu ihe bụ akụnụba akparamagwa?
Akụ na ụba akparamagwa bụ ịmụ mkpebi mmadụ. Nchọpụta a na -atọ ụtọ n'ihi na ndị na -azụ ahịa anaghị eme mkpebi ndị azụmaahịa na -atụ anya ya. Enwere ọtụtụ ọmụmụ na -akọwa ụkpụrụ omume dị iche iche nke anyị nwere ike ịmụta na ya iji nyere aka hụ na anyị na -enye ndị ahịa na ndị ahịa ahụmịhe dị mma. Nke a dị ezigbo mkpa na azụmaahịa anyị, ebe anyị na -elekwasị anya na ikpughere nghọta ndị ahịa na -ewulite mmekọrịta siri ike n'etiti ndị ahịa anyị na ndị ahịa ha.
Maka nghọta miri emi gbasara akụnụba akparamàgwà, ịgụ akwụkwọ akwadoro bụ Amụma enweghị ezi uche: Ndị zoro ezo na -akpụzi mkpebi anyị nke Dan Ariely dere.
A bịa na mmemme iguzosi ike n'ihe, enwere ọtụtụ ụkpụrụ omume gbanyesiri mkpọrọgwụ ike na egwu-mwepụ nke mfu, ihe akaebe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, imekọ ihe ọnụ, mmetụta nlele mgbaru ọsọ, mmetụta ọganiihu enyere ya na ihe ndị ọzọ. Maka ụdị na -atụle otu esi ekwupụta mmemme iguzosi ike n'ihe ha, ọ dị oke mkpa ịghọta na mmadụ chọrọ ịbanye, inwe mmetụta nke ihe ma anyị kpọrọ asị na anyị agaghị atụfu ihe.
Mmemme iguzosi ike n'ihe kụrụ akara ndị ahụ niile, yabụ ịkọrọ ha nke ọma kwesịrị ịmalite ozugbo. Mgbe a bịara ime ka iguzosi ike n'ihe bụrụ ihe na -atọ ụtọ ka ndị otu gị wee sonye na ya, ụdịdị kwesịrị ịma na inwe ọganihu na -adị ngwa ngwa, igosipụta ihe ọ rụpụtara, na ime ka ọ na -atọ ụtọ dị ike.
Emebere ahụmịhe dijitalụ gị maka ezigbo akparamagwa ahịa? Budata akwụkwọ akụkọ anyị anyị na ya rụkọrọ ọrụ Akụkọ zuru ezu na -edepụta ụkpụrụ akụ na ụba akparamagwa anọ nke ị nwere ike iji wuo ahụmịhe dijitalụ mmetụta, kensinammuo, yana ntụgharị dijitalụ dị elu:
Budata akụnụba omume na -arụ ọrụ
ngosi: Martech Zone gụnyere njikọ njikọ Amazon ya na Akwụkwọ Dan ebe a.
Tags: akụnụba omumemgbịrịgba brooksịzụ omumeomume n'ji ahiaiguzosi ike n'iheiguzosi ike n'iheNghọta mmemme mmemme iguzosi ike n'iheiguzosi ike n'ihe mmemmena -ebu amụma enweghị isi
Suzi Tripp sonyeere Brooks Bell na 2011, na -elekọta ma na -eto mmemme nnwale maka usoro mgbasa ozi ha na -agbasawanye. N'ime ọrụ ọ na -arụ ugbu a dị ka VP nke Insights, Suzi nwere ike ịga n'ihu na -enwe agụụ nke imepụta atụmatụ nnwale na ikpughere nghọta ndị ahịa bara uru iji dozie nsogbu azụmahịa dị mgbagwoju anya.
RANT: Ownnye nwere ngalaba gị?
Imewe bụ onye nnọchi anya juu nke ika gị